Ihe ndi ulo gypsum na putty - Divenland
Mmiri na-egbochi mmiri nke mgbidi dị n'ime ụlọ, putty na-agbanwe agbanwe maka mgbidi mpụga
Emere ọkwa atọ mgbe ị na-ese ụlọ: mgbidi, akwa putty na agba oyi akwa. Dika ihe nkedo nke ihe nkedo, ihe nkedo a di ka ihe nkwado maka nkpuchi nke elu na ala. Ezi putty obughi nani na-egbochi mgbawa nke mkpụrụ osisi na peeling nke agba agba, kamakwa ọ na-enye ezigbo mgbidi na enweghị ntụpọ na mgbidi. Enwere ike iji ya maka ihe ndozi na ebumnuche arụmọrụ. Cellulose ethers nye putty na-arụ ọrụ oge zuru ezu na-ekwe nkwa na wetting, recoatability na ire ụtọ nke mkpụrụ. Ogbe scraping, kamakwa kwesịrị ime ka putty nwere magburu onwe bonding arụmọrụ, mgbanwe, sandability, wdg.
Max cellulose ether nwere ike belata esemokwu na ntụ ntụ n'oge agwakọtara na mmiri, na-eme ka ịgwakọta dị mfe ma chekwaa oge agwakọta. Ihe ndị magburu onwe ha na-ejide mmiri na-ebelata oke mmiri nke mgbidi ahụ na-etinye, nke n'otu aka na-eme ka mmetụ ọkụ na-acha ọkụ. Ihe gel nwere oge zuru ezu iji hichaa, nke na-emezi ka nkekọ dịkwuo mma ma, n'aka nke ọzọ, na-achọpụta na ndị ọrụ nwere ike itinye mgbidi ahụ ọtụtụ oge. Ọkpụkpọ; gbanwere cellulose ether, ọbụlagodi na nnukwu okpomọkụ, mana ka na-ejigide mmiri dị mma, dabara maka oge ọkọchị ma ọ bụ ebe ọkụ. ihe owuwu; ọ na - emekwa ka mmiri dị mkpa maka ihe a na - etinye, nke na - eme ka arụmọrụ nke putty ahụ dịkwuo mma mgbe etinyere ya na mgbidi, na aka nke ọzọ, ọ nwere ike asingbawanye ebe mkpuchi nke putty na-eme ka usoro a dịkwuo mma.
Ihe eji eme ulo nke Gypsum
Sistemụ mgbidi nke Gypsum na-arụ ọrụ eco-mgbidi. Ọ na - anabata gypsum dị ka ihe gel, si otú a na - edozi nsogbu dị iche iche dịka ịmịpịa na nsị, nke dị na ihe eji eme simenti ọdịnala. Ojiji nke oru ihe eji eme ya, o bughi na o gha eme ka oru oma ya di nma, kama o na eme ka odi nma na oru a. Gypsum bụ ụdị ihe eji ewu ụlọ nke na - akpụ micropores dị n’ime ihe ahụ ma ọ gwọchara ya, ma na - arụ ọrụ dị oke mkpa na ndozi ime ụlọ ọgbara ọhụrụ. Na ngwaahịa ndị dabeere na gypsum, cellulose ethers na-arụ ọrụ dị mkpa ma ọkwa ọkwa ma caulks.
Ọ bụ enweghị mmetụta na alkalinity nke gypsum ma nwee ike ịgbanye ngwa ngwa gypsum na-enweghị agglomeration, nke na-enweghị mmetụta na-adịghị mma na porosity nke ngwaahịa gypsum gwọrọ; ihe njigide ya nwere oke mmiri nwere ike ijigide mmiri ahụ n'ime ngwa agha, ebe a na-eme ka gypsum ahụ sie ike; ntinye mmiri kwesịrị ekwesị na-eme ka njigide nke ihe ahụ sie ike, nke na-eme ka ọrụ owuwu nke ngwaahịa gypsum dịkwuo mma, ma dịkwa mfe ịgbasa na-ejikọtaghị mma; arụmọrụ ya dị mma na - egbochi ọfụma na - enye onye na - arụ ya iwu ka o tinye ihe ndị ahụ n'amaghị ama. n'ihi na ofu ego nke akọrọ ngwa agha, ọnụnọ nke cellulose ether nwere ike na-emepụta ihe na-ekpo ọkụ ngwa agha olu.